यसपाली विश्वकपको भविष्यवाणी बिरालोले गर्ने - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यसपाली विश्वकपको भविष्यवाणी बिरालोले गर्ने
प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०७५, आईतवार
एजेन्सी । आगामी बिहीबारबाट सुरु हुने फिफा विश्वकप नजिकिँदै गर्दा मानिसहरुले को जित्ला भनेर आ–आफ्ना भविष्यवाणीहरु गर्न थालिसकेका छन्। विश्वकपमा सुरुवातमा ४८ समूहका खेलहरु हुनेछन्। उनीहरुबाट दोस्रोचरणका लागि छनोट भएका १६ हुदै ८ टोलीले क्वार्टरफाइनल खेल्नेछन्। त्यसपछि सेमिफाइनल र अनि फाइनलको टुंगो एकमहिनापछि जुलाई १५ मा लाग्नेछ।
यस विश्वकपमा पनि जनावरको भविष्यवाणीलाई निरन्तरता दिइएको छ। अफिसियल रुपमा यसविश्वकपको भविष्यवाणी रुसको एउटा बिरालोले गर्ने भएको छ। एकिलिज नाम गरेको निलो आखाँ र सेतो रंगको कान नसुन्ने बिरालोले यसपटकको विश्वकपको भविष्यवाणी गर्ने भएको हो। उक्त बिरालो हाल पिटर्सबर्गको हर्मिटेज म्यूजियममा राखिएको छ। बिरालोलाई यसअघिबाट नै विशेष प्रशिक्षण दिन थालि सकिएको म्युजियमले जनाएको छ।
पल अक्टोपसले २०१० मा दुई देशका झन्डा राखिएका दुई मध्ये एक बक्सलाई छनौट गर्दै विश्वकपको भविष्यवाणी गरेको थियो। एकिलिजका अगाडी खेल हुने दुई देशका झन्डाहरु अंकित बलहरु बिरालोको खानासहित राखिने भएको छ। त्यसमध्ये उसले जुन छनोट गर्छ त्यसलाई उसको भविष्यवाणी मानिनेछ। उनले गरेका भविष्यवाणीहरुको प्रत्यक्ष प्रशारण पनि गरिने भएको छ।
एकिलिजलाई नै किन छनोट गरियो त?
म्युजियममा उनको हेरचाहको जिम्मा पाएकी अन्ना कासातकिना भन्छिन्, ‘यसअघि एकिलिजले कन्फडेरेसन कपको पनि भविष्यवाणी गरेको थियो। जसमा उसले गरेका भविष्यवाणी शत प्रतिशत मेल खायो। उ कान नसुन्ने भएकाले पनि निष्पक्ष भविष्यवाणी गर्ने गर्छ। कान नसुन्ने भएकाले बाहिरबाट उसको ध्यानभंग पनि कसैले गर्न सक्दैन् र उसले आफ्नो हृदयले सही भविष्यवाणी गर्नेछ।’
यी हुन् विश्वकपमा आज हुने चार खेल
काठमाडौँ । बेलुका ७ः४५ – मेक्सिको भर्सोस स्वीडेन, समूह एफ स्थानः इकाटरिनबर्ग बेलुका ७ः४५ – दक्षिण […]
काठमाडौ । बेलुका ७ः४५ – जापान वि. पोल्याण्ड, समूह एच स्थानः भोल्गोग्राड एरेना, भोल्गोग्राड बेलुका ७ः४५ – […]
विश्वकपमा को को खेल्दै छन् ब्राजिलको टिमबाट ?
एजेन्सी । अर्को महिनाबाट रुसमा सुरु हुने विश्वकप फुटबल २०१८ का लागि ब्राजिलले २३ सदस्यीय अन्तिम टोली […]
यस्तो छ ‘विश्वकप २०१८’को नेपाली समय अनुसार समय तालिका
काठमाडौँ । विश्वकप फुटबलको चार वर्ष लामो प्रतीक्षा बिहीबार समाप्त हुँदैछ । अर्जेन्टिनाका नेस्टर पिटानाले […]